Nzira yekuziva sei mhedzisiro yeiyo Soccer World Cup mune yedu Gnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yenhabvu yenyika mukombe yatanga uye nyika yepakomputa yanga isina kukuvadzwa nayo. Iyo Internet izere neruzivo nezve vatambi, mhedzisiro, machisi, memes, nezvimwe ... Asi kune zvakawanda zvakadaro chinhu hazviwanikwe nekuti ivo havashandise kana havadi kufambisa kuti uwane rumwe ruzivo.
Neraki vagadziri vafunga nezvese uye Vakagadzira nzira dzakasiyana dzeedu Gnu / Linux distro kuti vatipe ruzivo nezve iyo Soccer World Cup. pasina kukosha kwekuvhura bhurawuza hwindo.
1 Desktop Applet
2 Terminal chikumbiro
Maitiro echipiri haanyanyo kuoneka asi nekukurumidza. Iripo chirongwa chatinogona kushandisa neyekuraira terminal uye ichatiratidza nenzira yakapusa mhedzisiro yemitambo. Iko kunyorera kunodaidzwa kunzi wowcup uye inowanikwa kune ese kugoverwa. Kuti tiise iyo isu tinofanirwa kuita zvinotevera mune yekuraira terminal:
Tingave tisina npm yakaiswa mune yedu yekugovera, yeiyo isu tinofanirwa kuisa tekinoroji iyi kutanga tozoita rairo yapfuura. Zvekuiswa kweNPM isu tinofanirwa kutevera gwaro iri.
Maitiro acho ari nyore uye anokurumidza, asi mashoma kutaridzika kupfuura iyo El Atareao applet. Chero zvazvingaitika, nzira dzese dzinoshanda kuziviswa nezve World Cup pasina kutarisa mapeji eInternet.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Nzira yekuziva sei mhedzisiro yeiyo Soccer World Cup mune yedu Gnu / Linux